ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံ (၂၀၁၀၉) ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြProbleနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံ (၂၀၁၀၉) ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
မှတ်ချက်များ YBOP: လွင်ပြင်အင်္ဂလိပ်တွင်မူ၊ ဤသုတေသနသည် (နောက်တဖန်) ဘာသာတရားသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်မိမိကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူ (“ အပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု)” အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသူသည်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းသူတစ် ဦး အဖြစ်ယုံကြည်မှုသည်ကမ္ဘာသို့“ ရောင်း” ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သောဂျိုဂရော့ဘ်စ်မှမှတ်မိစေသည်။ Grubbs ၏ CPUI-9 လေ့လာမှုများနှင့်အမှန်တကယ်ဒေတာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏မှားယွင်းစွာပြောဆိုမှုများကဤကျောက်မျက်ရတနာကဲ့သို့သောတိကျမှန်ကန်သောဝါဒဖြန့်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Porn အကဲခတ် OK ကို Is ။ Porn စွဲခုနှစ်တွင်ယုံမ Is.
အဓိကအချက်ဖြေ - အစောပိုင်းက Grubbs လေ့လာမှုများက porn အသုံးပြုသူများကိုသူတို့မမေးခဲ့ဘူး သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်တယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းရန်။ Josh Grubbs ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုအားလုံးသည်သူ၏မှားယွင်းသော ၉ ချက်ပါသောမေးခွန်းလွှာ (CPUI-9) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းမှာဘာသာရေးဘာသာရပ်များသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကိုသေချာစေသည်၊ အကြောင်းမှာမေးခွန်း ၉ ခုအနက် ၃ ခုသည်စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ဘဲအပြစ်နှင့်အရှက်ကိုအကဲဖြတ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဂရော့ဘ်စ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သူ၏လတ်တလောလေ့လာမှုများတွင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်“ CPUI-9 ကိုအရှက်ခွဲအကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဖြောင့်ဖြောင့်မှန်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းသည်ဟုယုံကြည်သူများအကြားဆက်စပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သည်အများအားဖြင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ သူတို့ကိုယ်သူတို့စွဲလမ်းသူအဖြစ်“ ရိပ်မိ” သူအမြောက်အများသည်အကျိုးမဲ့သောတရားသေအယူဝါဒ၏မိမိကိုယ်ကိုလှည့် စား၍ အရှက်ရစေမည့်အစားမှန်ကန်သည်ဟုဆိုကြသည်။
အမှန်မှာ၊ ရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းခြင်းဖြစ်သည် အနုတ်လက္ခဏာ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတွင်သူမပါဝင်ပါ။
လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်ယခင်နှစ်ခုနှစ်ခု (လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2Josh Grubbs ၏မှားယွင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာ (CPUI-9) ကို YBOP ၏အစောပိုင်းဝေဖန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့်ကိုက်ညီပါစေ။ ယောရှုသည် Grubbs သူ၏ "ရိပ်မိ porn စွဲ" သုတေသနနှင့်အတူငါတို့မျက်မှောက်ကျော်သိုးမွှေးဆွဲသလဲ? (2016)
J ကိုလိင် Med ။ 2019 ဒီဇင်ဘာ6pii: S1743-6095 (19) 31783-7 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2019.11.259
Lewczuk K သည်1, Glica A2, Nowakowska ငါ3, Gola M က4, Grubbs JB5.
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် (၁) ယေဘူယျစည်းမျဉ်းမသတ်မှတ်ခြင်း၊ (၂) အသုံးပြုမှုအလေ့အထများနှင့် (၃) စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမူအကျင့်များအကြားကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်းတို့ကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြevaluateနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်မိမိသိမြင်နားလည်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာများရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း (မော်ဒယ် ၂) အားဤပုံစံအားအသုံးပြုနိုင်သည်ရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းနှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုတစ်ခုကိုပိုလန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၃၆ ဦး ၏နမူနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၈၈၀ ကမူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏တစ်သက်တာသမိုင်းကြောင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ရလဒ်များမှာမိမိကိုယ်ကိုအပြာစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ရှောင်လွှဲခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြိမ်ရေ၊ ဘာသာရေး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော variable များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရရှောင်ကြဉ်ခြင်း (အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရညွှန်ပြသည့်အရာ)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ (အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများအကြားကွဲလွဲမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်ပြaddနာများ၊ (ပုံစံ ၁) ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း (ပုံစံ ၂) ။ ၎င်းသည် PPMI မော်ဒယ်၏အခြေခံပုံစံကိုကျယ်ပြန့်စွာအတည်ပြုသည်။ မော်ဒယ်များအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုသို့သော်ရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ incongruence နှင့်ဆက်စပ်သောဆင်းရဲဒုက္ခပြpornနာအပြာစာပေအသုံးပြုမှု (β = 1, P <.2) နှင့်အတူပိုမိုအားနည်း Self- ရိပ်မိစွဲ (β = 0.15, P <.001) နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ အခြားသောအချက်များအတွက်ထိန်းချုပ်သည့်အခါဘာသာရေးဘာသာတရားသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု (β = 0.31, P <.001) ကိုအားနည်းစွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအားမိမိကိုယ်မိမိထင်မြင်ယူဆခြင်းမပြုပါ (β = 0.13, P = .001) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည် self = 0.03, P <.368) နှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု (β = 0.52, P <.001) နှစ် ဦး စလုံး၏ပြင်းထန်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
တင်ပြသောလေ့လာမှုသည် PPMI ပုံစံကိုပထမဆုံးအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကကန့်သတ်ချက်မှာ၎င်းသည် cross-sectional design ရှိသည်။
PPMI မော်ဒယ်သည်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းနေစေသည့်ပြandနာနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုစုံစမ်းရန်အလားအလာရှိသောမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံစံများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ၏အားသာချက်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်း (၁) ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ (၂) အသုံးပြုမှုအလေ့အထများနှင့် (၃) ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမညီညွတ်ခြင်းအားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြographyနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုထူးခြားစွာအထောက်အကူပြုသည်။ Lewczuk, K. , Glica, အေ, Nowakowska, I. , et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြographyနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Med 2019; XX: XXX-XXX ။
KEYWORDS: compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ; ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း; ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence; အပြာစာပေစွဲ; ပြနာအပြာစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ဘာသာတရား
ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။1 အမျိုးမျိုးသောသုတေသနအဖွဲ့များကထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအချို့သို့မဟုတ်အားလုံး၏ရှုထောင့်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။2, 3, 4, 5, 6,7သို့သော်မော်ဒယ်များ၏ပင်ကိုယ်မူလအကဲဖြတ်မှာကြိုးစားမှုယေဘုယျအားဖြင့်မဖြစ်စလောက်နှင့်သိသိသာသာပါပြီ။ ဝမ်းနည်းစရာမှာဤဝေဖန်မှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဤအခြေအနေသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ Gold နှင့် Heffner တို့၏နယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အစောပိုင်းကသတိပြုမိခဲ့သည်။8 သို့သော်အနှစ် ၂၀ ကျော်အကြာတွင်ပြtheနာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသုတေသီများက Gola နှင့် Potenza တို့ကဝေဖန်မှုကိုခံနေရသည်9,10 သို့မဟုတ်ချီးမွမ်း။11
ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏မော်ဒယ်များအကဲဖြတ်အတွက်ပင်ကိုယ်မူလညှဉ်းဆဲခြင်းကိုမရှိခြင်းများအတွက်တစ်ခုမှာယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်လက်ရှိမော်ဒယ်များအများဆုံးမကြာခဏဆင်းသက်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ post ကို hoc မျိုးစုံလေ့လာမှုများ (အများအားဖြင့် nonsystematic) ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်စေထံမှ (ဝေါ်လ်တန် et al အားဖြင့်လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်)5 နှင့်အမှတ်တံဆိပ် et al12) သို့မဟုတ်စာပေများ၏ကျဉ်းမြောင်းသောခညျြအနှော၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta- ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှတဆင့် (Grubbs et al အားဖြင့်လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်3) ။ သူတို့အဆိုပြုထားပြီးနောက်ပြည့်စုံပင်ကိုယ်မူလအတည်ပြုချက်မှာကြိုးစားမှုအဆိုပြုထားမော်ဒယ်များတစ်ပြန့်ပွားပေမယ့်လက်တွေ့ကျကျအတည်ပြုမော်ဒယ်များရှားပါးမှုအတွက်ရလဒ်, ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ပုံစံတစ်မျိုး၏အခြားတစ်ခုထက်ပိုမိုခိုင်မာသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးမှုအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ မည်သည့်သီးခြားအမြင်ကိုမဆိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်၎င်းသည်ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏သုတေသနနယ်ပယ်တွင်တိုးတက်ရန်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤအားနည်းချက်သည်ယခုအခါအထူးသဖြင့်ပိုမိုအားနည်းနေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) ကို ၁၁ တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းထုတ်ဝေခြင်း၊13,14 ၎င်း၏သိပ္ပံနည်းကျအုတ်မြစ်၏ status နှင့်ပတ်သက်။ အသံကျယ်ကန့်ကွက်နေသော်လည်း။15
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံ (PPMI model) ကြောင့်လတ်တလောအဆိုပြုထားသောမော်ဒယ်များအနက်တစ်ခုမှာ Pornography ပြtheနာများဖြစ်သည်3၎င်း၏ထုတ်ဝေအပေါ်သို့သုတေသီများအနေဖြင့်အလွန်သိသာထင်ရှားသောအာရုံကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့) ။ , ။3,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 PPMI မော်ဒယ်လ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြgroupsနာများကိုအချက် (၃) ခုမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၁) သက်ရောက်မှုရှိသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ (ဥပမာမြင့်မားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ တုန့်ပြန်မှုနည်းသောဖြေရှင်းနည်းများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှု)၊ (၂) အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကြိမ်နှုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် (၃) ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများနှင့်တကယ့်အပြုအမူများအကြားပconflictိပက္ခ) ။ မော်ဒယ်၏နာမကိုအကြံပြုသကဲ့သို့, ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence -related အချက်များ PPMI မော်ဒယ်အတွင်းအထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးနေကြသည်နှင့်သူတို့အကြားဆက်ဆံရေးအကြီးမြတ်ဆုံးအသေးစိတ်တင်ပြကြသည်။
PPMI မော်ဒယ်၏အဓိကအချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောသူများအကြားထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုကိုယ်ကျင့်တရားမ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး အနေနှင့်မိမိယုံကြည်ချက်များ၊ စံနှုန်းများနှင့်သဘောထားများနှင့်တစ်ဖက်တွင်ရှိသောအပြုအမူများအကြားမမျှတမှုခံစားချက်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟူသောအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ ။ မော်ဒယ်၏စာရေးသူများကကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကို Festinger မှတင်ပြထားသည့်သဘာဝနှင့်ဆင်တူသည့်ယန္တရားများ၏ဆက်စပ်မှုများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်23 သိမြင်မှု dissonance သီအိုရီ၌တည်၏။ ထို့အပြင်သုတေသနပြုချက်အရ၊ အနည်းဆုံးလူအများစုအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း၊24 သောမော်ဒယ်ခန့်မှန်းသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်သုတေသနတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘာသာရေးကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။25, 26, 27, 28 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲမက်ခြင်း၏ဆိုးရွားသည့်လက္ခဏာများ၊29 ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ကုသခြင်း30 (ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်, Grubbs နှင့် Perry ၏လေ့လာမှုကိုကိုးကားပါ24).
PPMI မော်ဒယ်သည်လက်ရှိစာပေတွင်အရေးပါသောအထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာယင်း၏အဓိကအချက်မှာအာရုံစူးစိုက်မှု - ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သောဆက်စပ်မှုများကိုအခြားမော်ဒယ်များတွင်လျစ်လျူရှုထားသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည့်အခြားအကြောင်းအချက်များ (ဥပမာ - dysregulation-related တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ) သည် PPMI ပုံစံကိုကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမညီညွတ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းပုံစံကိုကျဉ်းမြောင်းသော၊ အထူးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သာမကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများအပေါ်သက်ရောက်နေသောအချက်အလက်များဖွဲ့စည်းပုံကိုစုံစမ်းရန်ပိုမိုယေဘုယျမူဘောင်တစ်ခုအဖြစ်ကုသနိုင်သည်။
ထို့အပြင်မော်ဒယ်သည်မိမိကိုယ်မိမိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းစေသောအကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်3 နှင့်လည်း Self- ရိပ်မိစွဲခန့်မှန်းသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်။3,25,31 သို့သော်မော်ဒယ်၏စာရေးသူများအဆိုအရ PPMI မော်ဒယ်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမူအကျင့်၊ သိမြင်မှုနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုလွှမ်းမိုးရန်အချက်များအားစုံစမ်းရန်အတွက်သင့်တော်သောမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဤအခန်းကဏ္inတွင်လေ့လာသင့်သည်။
Self- ရိပ်မိစွဲမှတ်နှင့်အတူ PPMI မော်ဒယ်လ်
မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး အားသူသို့မဟုတ်သူမသည်စွဲသူများ၏အုပ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောခံယူချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအမြင်သည်စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာအားစွဲလမ်းသူအားမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာ၏ပုဂ္ဂလစိတ်၊ “ ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းနေတယ်” စတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမျက်မြင်သက်သေဖော်ပြချက်တွေကြောင့်25 (သို့)“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲလမ်းသူလို့ငါခေါ်မယ်။ ”26 ဤကဲ့သို့သောဖော်ပြချက်များနှင့်သဘောတူခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏သိမြင်မှုလုပ်ရပ်ကိုထင်ဟပ်စေပြီးပုံမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာသီအိုရီများနှင့်မပတ်သက်ပါ။ သို့သျောလညျး, ထိုကဲ့သို့သော Self- တံဆိပ်များကိုသူတို့ Self- ခြိုးခြံခြွေဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အရေးကြီးလှသည်32 ဆင်းရဲဒုက္ခ, ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုရှာကြံ။3,25 "Self- ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု" ကိုလည်ပတ်စေသည့်နည်းလမ်းသည်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ဆွေးနွေးမှုများအတွက် Brand et al ၏လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်)16 Grubbs et al,26,31 နှင့်ဖာနန်ဒက်စ et al33ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရှင်းလင်းစွာလည်ပတ်နေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်စွဲလမ်းသူအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမိမိကိုယ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ တိုင်းတာမှုသည်တိုင်းတာမှုအပြုအမူလက္ခဏာများကိုအရေအတွက်အရကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခြင်း (ဥပမာအသုံးပြုခြင်းအကြိမ်ရေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများသည်ဆေးစွဲခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောအထူးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ သို့သော်စွဲလမ်းသူအားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။3
ပြMIနာအပြာစာပေအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ PPMI ပုံစံ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အမှန်တကယ်ရှုပ်ထွေးသောလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး အဖြစ်ကြေငြာခြင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ဤလက္ခဏာများကို“ ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း” ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီး (၁) အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၊ (၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်မအောင်မြင်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများ၊ (၃) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ()) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ (၅) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပါ ၀ င်မှုသည်စိတ်သောကရောက်ခြင်း (သို့) အခြားဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါ၌ပင်အသုံးပြုခြင်း34 ဤနည်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမညီညွတ်သောအပြုအမူများ (စွဲလမ်းစေခြင်း (သို့) စွဲစေသည့်အပြုအမူများ) ကိုပိုမိုရိုးရှင်းပြီး၊ ဤအထွေထွေရောဂါလက္ခဏာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြassessနာများကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ကြေငြာသည့်နည်းလမ်းအားလုံးအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။35 ဤအမှုများသည်အပြုအမူ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအချက်များ၏အရေအတွက်ဖော်ပြချက်သည်တုံ့ပြန်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်အနည်းဆုံးဓမ္မဓိof္ဌာန်ကျသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ပြသောလက္ခဏာများသည်သူ၏ orher ၏ကိုယ်ပိုင်စွဲချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည်“ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်း” ဖော်ပြချက်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသေချာပေါက်ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဤဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးသည်သိသာထင်ရှားစွာလေ့လာရန်ထိုက်တန်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မကြာခဏအခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာရှိသည် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီများကိုပိုမိုထင်ဟပ်စေသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုတိကျစွာထင်ဟပ်စေသော Self-stigmatization သို့ ဦး တည်သည့်ပုဂ္ဂလိကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) နှင့်ဤဌာနခွဲအနေဖြင့် PPMI model နှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနမေးခွန်းများအကြားရှင်းလင်းစွာခွဲခြားထားသင့်သည်။ သုတေသန၏၎င်း၏လက်ရှိကန ဦး အဆင့်ကနေဖွံ့ဖြိုး။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောရှင်းလင်းပြတ်သားသောလယ်ကွင်းသို့သယ်ဆောင်သင့်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအဆိုပြုထားဂုဏ်ထူးအောက်ပါအတိုင်း။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Grubbs et al3 PPMI မော်ဒယ်၏အကြမ်းဖျင်းအချက်အလက်များအရမော်ဒယ်လ်သည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ” နှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုအပေါ်မိမိကိုယ်မိမိထင်မြင်ချက်ကိုသာရှင်းပြသင့်သည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် PPMI မော်ဒယ်သည်စွဲလမ်းမှု၏မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ပုံနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၏ကျယ်ပြန့်သောတည်ဆောက်ပုံကိုရှင်းပြရန်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ထိုက်တန်သည်။ ဤအမှုကိစ္စနှစ်ခုလုံးတွင်ပုံစံကိုအောင်မြင်စွာအတည်ပြုခြင်းက PPMI မူဘောင်ကိုပိုမိုခိုင်မာအောင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြissuesနာ (၂) ခုရှိတယ်။ ပထမဖော်ပြချက်အရ PPMI ပုံစံနှင့်အညီကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမညီညွတ်ခြင်းကိုဘာသာရေးယုံကြည်မှုများကသိသိသာသာလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ဤအငြင်းပွားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပြီး၎င်းမှထွက်ပေါ်လာသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမျဉ်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်နာသင့်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ သို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသည့်စပ်လျဉ်း။ postulated ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုမကြာခဏလည်ပတ်စေသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကြိုတင်သုတေသနပြုခြင်းတွင်မြှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာသာရပ်အပေါ်အစောပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်, Grubbs et al36 အောက်ပါဖော်ပြချက် ၄ ခုဖြင့်ဤတည်ဆောက်မှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် -“ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏သိစိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ”“ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများကိုချိုးဖောက်သည်။ ”“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ။ " ဖော်ပြချက် (၄) ခု၏နောက်ဆုံးမှသာဘာသာရေးယုံကြည်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည့်“ သြတ္တပ္ပစိတ်” ကိုအသုံးမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်ဤဖော်ပြချက် ၄ ခုအနက်ပထမ ၂ ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုများကိုကျင့် ၀ တ်ရေးရာနှင့်မကိုက်ညီမှုထက် ပိုမို၍ ပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်“ သြတ္တပ္ပစိတ်” ဟူသောရည်ညွှန်းချက်သည်လည်းဘာသာရေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်ဘာသာရေးခံယူချက်များ၏အင်အားသည်ဤကဲ့သို့သောမကိုက်ညီမှုများအတွက်သဘာဝရင်းမြစ်ဖြစ်သော်လည်း PPMI ပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလည်းဘာသာရေးအခြေအနေအပြင်ဘက်တွင်လေ့လာသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသောခန့်မှန်းသူအမြောက်အများရှိနိုင်သည်။ ဘာသာရေး (ဥပမာနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအမြင်များ) ။19 ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်မကိုက်ညီခြင်းတို့သည်ဤအချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည့်နည်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာများစွာသောစိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်ကိုအထိခိုက်မခံသောနည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်သင့်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ အချို့သောသုတေသနများတွင်အထူးသဖြင့်ပိုမိုတိုတောင်းသော protocols များကိုအသုံးပြုသောလေ့လာမှုများတွင်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားမှားယွင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်” မတိုင်မီကဖော်ပြခဲ့သော ၄ ၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုမှကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်။25 ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤဖော်ပြချက်သည်ဘာသာရေးအခြေအနေနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိသောကြောင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသည့်စိုးရိမ်မှုများသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုတိကျမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမထောက်ခံမှုဖြစ်သည်။37 ဤမှတ်ချက်သည် Grubbs et al ဦး ဆောင်သောအစောပိုင်းလက်ရာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။36,38 အရာအတွက်တံဆိပ် "ကိုယ်ကျင့်တရားမကျေနပ်မှု" ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာနှစ်ဆဖြစ်သည်။ (၁) ယုံကြည်သောစံနှုန်းများကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်၏အပြုအမူကိုအသိအမြင်ရှိခြင်း (သို့) ထိခိုက်လွယ်မှု (variable) တွင်ပါဝင်သည်မှာ (Wright ၏လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်)22) နှင့် (ii) ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်သက်တာထိတွေ့မှုကိုကြေငြာသောဘာသာရပ်များအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကန့်သတ်ချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသူ (ဥပမာ၊ တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်၊ သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေပိုများသည့်) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့မြင်နေရခြင်းသည်ရံဖန်ရံခါကျူးလွန်မိသောအပြစ်များကိုအလွယ်တကူလျစ်လျူရှုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လတ်တလောအလုပ်, Grubbs et al37 ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ဒုတိယအချက်ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်းပထမအဆင့်မှာမူဤတိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်အမူအကျင့်နှင့်စံနှုန်းများအကြားကွဲလွဲမှုရှိခြင်းအပေါ်နားလည်သဘောပေါက်မှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်လွယ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျင့်ဝတ်နှင့်မညီညွတ်ခြင်း မှလွဲ၍ ဤအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအတွင်းကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသည့်အခက်အခဲများကိုလည်းတိုင်းတာခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ အပိုင်း) သည်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းများနှင့်အပြုအမူများအကြားမတူညီမှုနှင့်ပိုမိုတိကျသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမညီညွတ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသည့်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာမှုဖြစ်သည်။ ဒီဖြည့်စွက်ခြင်းသည် PPMI မူဘောင်ကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးရည်မှန်းချက်ဒေတာများကို PPMI မော်ဒယ်၏တိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်စာပေတွင်ပထမဆုံးသောကြိုးစားမှုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုပုံစံပေါ် အခြေခံ၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်လမ်းကြောင်း (၃) ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ (၁) ခွဲခြားမှုမရှိသောလမ်းကြောင်း၊ (၂) အသုံးပြုမှုအလေ့အထနှင့် (၃) ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်သောလမ်း (ပုံ 1) ။ Grubbs et al ပေမယ့်3 ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်လမ်းကြောင်း ၁ နှင့် ၃ ရှိခြင်းကိုအလေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်အသုံးပြုမှုအလေ့အထကို၎င်းတို့မှမည်သည့်အရာကမျှအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမညီညွတ်ခြင်း၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ) နှင့် ထို့ကြောင့်သီးခြားလမ်းကြောင်း (လမ်းကြောင်း ၂) ကိုဖွဲ့စည်းရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, ဒီလက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုမိုရှင်းလင်းစေလိမ့်မယ်။
Grubbs et al မှအဆိုပြုထားသော (n = 880 နမူနာကို အခြေခံ၍) Moral Incongruence မော်ဒယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။3 Self- ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုကိုအဓိကမှီခိုတဲ့ variable ရဲ့အခန်းကဏ္inမှာထားတယ်။ စံသတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းကိန်းများကိုမြှားပေါ်တွင်ပြသည် (**)P <.001, *P <.05) ။ ကိန်းဂဏန်း၏ဖတ်ရလွယ်ကူမှုအဘို့, မော်ဒယ်နောက်ထပ်တလမ်းကိုသရုပ်ဖော်မထားဘူး: ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရှောင်ရှားဖြေရှင်း (r = 0.21 **) နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။
path ကို 1
စံပြ ၃ ၏စာရေးသူများမှပေးသောအကြံပြုချက်များအနက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တုန့်ပြန်မှုနည်းခြင်း (လမ်းကြောင်း ၁) ၏ညွှန်ပြချက်အနေနှင့်အထူးသဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ရသောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုကန ဦး အထောက်အထားများယူဆောင်လာခြင်းကြောင့်ဤပြောင်းလဲမှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။39, 40, 41 ထို့အပြင်ကျနော်တို့မော်ဒယ်အတွင်း avoidant ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထားခြင်းရှောင် 1 ကိုင်တွယ်သိသိသာသာကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်လမ်းကြောင်း3(dysregulation) နှင့် XNUMX (ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence) အကြားဖြစ်နိုင်သမျှဆက်သွယ်မှုကိုသရုပ်ဖော်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။ ရှောင်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာနယ်ပယ်ရှိစာပေများပေါကြွယ်ဝသောအထောက်အပံ့များဖြစ်သောမြင့်မားသောစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည် (ဥပမာ - Herman-Stabl et al,42 Holahan et al,43 နှင့် Roth နှင့် Cohen ကို44).
path ကို 2
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကြိမ်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသည့်လူကြိုက်အများဆုံး variable တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုအလေ့အထများ (လမ်းကြောင်း ၂) အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ PPMI ပုံစံအတွင်းမှာ3 ဤ variable ကိုအခြား variable များ၏လွှမ်းမိုးမှု၏ဖျန်ဖြေသူအဖြစ် (လမ်းကြောင်း ၁ နှင့် ၃ နှင့်သက်ဆိုင်သည်) ပုံ 1) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းမှုအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံတွင်ဤသဘောတရားအတိုင်းလိုက်နာသည်။
path ကို 3
PPMI ပုံစံတွင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုလမ်းကြောင်းကိုအထူးဂရုပြုထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိဆက်ဆံရေးကိုဘာသာရေး၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမညီညွတ်မှုနှင့်ဆိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုညွှန်းကိန်းများအဖြစ်အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့သည်။ပုံ 1) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောဘာသာတရားများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တမနှစ်သက်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားမတူကွဲပြားသည့်ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြdirectlyနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်၊ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးဆခဲ့သည် (Grubbs ၏လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်) နှင့်ပယ်ရီ24 သက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Grubbs et al,26 နှင့် Lewczuk et al27) ။ PPMI ပုံစံအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုတို့ကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဆင်းရဲမှုများကိုနှစ် ဦး စလုံးအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုလက်မခံခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ၊ ထို့အပြင် Grubbs et al ၏အဆိုပြုချက်နှင့်အညီ25ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောစိတ်သောကရောက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုကိုအပြုသဘောဖြင့်ခန့်မှန်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးဆခဲ့သည်။ ပုံစံ၏ဖော်ပြထားသောဒီဇိုင်းကိုပုံဖော်ထားသည် ပုံ 1.
ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာ PPMI မော်ဒယ်များ၏တရားဝင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု (မော်ဒယ် ၁) ကိုကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ရန်သာမကပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု (ပုံစံ ၂) ၏အစောပိုင်းအပိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ နိဒါန္း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်းထက်မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းအပေါ် ပိုမို၍ အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။
တတိယရည်မှန်းချက်မှာ PPMI မော်ဒယ်များ၏တရားဝင်မှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှလွဲ၍ အခြားယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေတွင်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်ပြင်ပမှတွေ့ရှိချက်များအရကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆက်နွယ်သောကိန်းဂဏန်းများ (ဥပမာ၊ ဘာသာရေးဘာသာ) နှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာများသည်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်မူတည်နိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။33,45,46 အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်မော်ဒယ်လ်ကိုအတည်ပြုခြင်းသည်မော်ဒယ်၏စာရေးသူမှသတ်မှတ်ထားသောအရေးကြီးဆုံးသုတေသနလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။3,31
အချက်အလက်များကို Pollster သုတေသနပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းမှကောက်ယူခဲ့သည်။https://pollster.pl/) ။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုပန်းတိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအစီအမံများကိုဖြည့်စွက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူများအုပ်စုကိုပိုလန်လူ ဦး ရေအတွက်ကိုယ်စားပြုရန် (စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲမှုအတွက် ၂၀၁၁ အတွက်ကျား၊ မအုပ်စုနှင့် ၂၀၁၈ အတွက်သန်းခေါင်စာရင်းစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍) ၂၀၁၇; ပိုလန်နိုင်ငံစာရင်းအင်းပိုလန်အတိုကောက် - GłównyUrząd Statystyczny) ။ ကိုယ်စားပြုနမူနာတွင်ဘာသာရပ်ပေါင်း ၁၀၃၆ ခုပါဝင်သည် (Lewczuk et al ၏လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်)27) ။ ယခင်လေ့လာမှုများအပြီးတွင် (ဥပမာ၊ Grubbs et al25), လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အဆက်အသွယ်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာကိုရှေးခယျြခဲ့ကြပြီးငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများအတွက်အခြေခံခဲ့သည်ခဲ့သည်သင်တန်းသားများကို (= = 880) ၏အစုအစု။ ထို့ကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဤအဖွဲ့ခွဲအတွက်သာအောက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ရလဒ်နမူနာတွင်ပါဝင်သူများသည်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၉ နှစ်ကြားရှိသူများဖြစ်ကြ၏။ ၄၄.၉% အမျိုးသမီးများ (n = 18), ၅၅.၁% အမျိုးသားများ (n = 69); Mအသက်အရွယ် = 43.69; SD က = 14.06 ။
ဖြေကြားသူများ၏ပညာရေးသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - အခြေခံနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှု (၂၇.၇%၊ n = ၂၄၄)၊ အလယ်တန်း (27.7%, n = 244) နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော (39.8%, n = 350) ။
ဖြေကြားသူများ၏နေထိုင်ရာနေရာမှာ ၃၇.၆%၊ n = ၃၃၁)၊ ၁၀၀,၀၀၀ မပြည့်သောမြို့တစ်မြို့ (၃၂.၃%၊ n = ၂၈၄)၊ ၁၀၀,၀၀၀ မှ ၉၉၉,၉၉ ယောက်နေထိုင်သောမြို့တစ်မြို့ (၁၇.၈%၊ n = 37.6) နှင့်လူ ဦး ရေ 331 ကျော်နှင့်အတူမြို့ (100,000%, n = 32.3) ။
ဒေသတွင်းရှိအခြားလေ့လာမှုများအပြီးတွင်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းနေသောစွဲလမ်းမှု၊25,26 Cyber-Pornography Use Inventory-9 မှရရှိသောအရာတစ်ခုကိုတိုင်းတာသည်။47 "ငါသည်အပြာစာပေစွဲလမ်းနေပါတယ်။ " အဖြေရွေးချယ်မှုများသည် ၁ (လုံးဝသဘောမတူ) မှ ၇ အထိ (လုံးဝသဘောတူ) ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကို Brief Pornography Screener (BPS) ဖြင့်စစ်ဆေးသည်34)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပြsymptomsနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်း ၅ ပုဒ်ပါသောစကေး။ သင်တန်းသားများသည် ၁ - ဘယ်တော့မှ၊ ၂၊ တခါတရံနှင့် ၃ - မကြာခဏဆိုသလိုစကေးဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်, BPS ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိသောရမှတ်များ၏ပေါင်းလဒ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည် (α = .5) ။
Hypersexual အပြုအမူအား Hypersexual Behaviour Inventory ၏အထွေထွေရမှတ်မှတဆင့်လည်ပတ်ခဲ့သည်။48 hypersexual အပြုအမူလက္ခဏာတွေကိုတိုင်းတာတဲ့ 19-item မေးခွန်းလွှာ။ အဖြေရွေးချယ်မှုများသည် ၁ (ဘယ်သောအခါမှ) မှ ၅ အထိ (မကြာခဏဆိုသလို) အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းအားလုံး၌ရရှိသောရမှတ်များ၏ပေါင်းလဒ်သည်အထွေထွေရမှတ် (α = .1) ဖြစ်သည်။
Dysregulation ကို COP မေးခွန်းလွှာမှတစ်ဆင့်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။49 COPE အကျဉ်းသည်ပစ္စည်း ၂၈ ခုပါ ၀ င်ပြီးမတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထင်ဟပ်သည့် subscales ၁၄ ခုရှိသည်။ သင်တန်းသားများတွင်အဖြေ (၁) မှ (ကျွန်ုပ်လုံးဝဤအရာကိုမလုပ်ခဲ့ပါ) မှ ၄ အထိအထိရှိသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအပြီးတွင် (ဥပမာ၊ Schnider et al50မိမိကိုယ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အမူအကျင့်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း (α = .5)) ၅ ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအလေ့အထများကိုအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်သည့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်ညွှန်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းတွင်ပါဝင်သူများသည်သူတို့ဘ ၀ တစ်လျှောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်မည်သည့်အခါမှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ကြောင်း (0 ဟုရည်ညွှန်းသည်) သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က (၁) မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုအမှတ်အသားပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘယ်တော့မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်) မှ 1 (တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ။
ဘာသာတရားကို Grubbs et al သုံးပစ္စည်းများဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်25 (“ ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသည်ဟုယူမှတ်သည်၊ ”“ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသည်” နှင့်“ ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပုံမှန်တက်ရောက်သည်”) တုန့်ပြန်မှုအတိုင်းအတာသည် ၁ (လုံးဝသဘောမတူ) မှ ၇ အထိ (လုံးဝသဘောတူသည်) အထိရှိသည်။ ဤအရာသုံးခုအတွက်ရရှိသောရမှတ်များကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (α = .1) ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
ဘာသာရေးဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခံရသူအများစုကကက်သလစ် (၇၇.၃%) ဖြစ်သည်ဟုဖြေဆိုကြပြီး ၃.၅% ကအခြားဘာသာရေးဆက်နွယ်မှု (ဥပမာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သြသဒေါက်စ်)၊ ၁၀.၆% သည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၊ ” အဖြေ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုအားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည် (“ အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှားယွင်းသည်ဟုယုံကြည်သည်”) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာအခြားသုတေသနပြုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။25) ။ တုန့်ပြန်မှုစကေးသည် ၁ မှ (လုံးဝသဘောမတူ) မှ ၇ အထိ (လုံးဝသဘောတူသည်) ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ incongruence နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်သောကရောက်မှုတစ်ခုသည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ အတွေးများနှင့်အပြုအမူများသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် / သို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ” သင်တန်းသားများက - ဤဖော်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအတွက်နောက်ဆုံး ၁၂ လအတွင်းအနည်းဆုံး ၆ ကြိမ်ရှိခဲ့သည်၊ ၁- ၁“ ဒီဖော်ပြချက်ကငါ့ဘဝအတွက်မှန်ကန်ပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ လအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူး” နှင့်2ဖြစ်သည်။ -“ ဒီဖော်ပြချက်ကငါ့အတွက်ဘယ်တော့မှမမှားခဲ့ဘူး။ ”
PPMI ပုံစံကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်များကိုစမ်းသပ်ရန် IBM SPSS Amos ကို အသုံးပြု၍ လမ်းကြောင်းဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်51 အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းသုံးနိုင်သည်။ စာပေတွင်မွေးစားထားသောစံနှုန်းများအရ ၀ င်ရိုးကောင်းမှုသည်အောက်ပါစံနှုန်းများကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အညွှန်းကိန်း (CFI) ၀.၉၅ ထက်ကြီးသောတန်ဖိုး၊ အကြမ်းဖျင်းအမြစ်စတုရန်းအမှား (RMSEA) သည် 0.95 ထက်နိမ့်သည်။ ကျန် (SRMR) 0.06 ထက်နိမ့်။52
နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အသုံးပြုသောအစီအမံများ၊ သုတေသနမေးခွန်းများနှင့်ပုံစံ၏အခြေခံ၊ သုံးလမ်းဒီဇိုင်းကိုပွင့်လင်းသိပ္ပံမူဘောင်မှတစ်ဆင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည် (https://osf.io/qcwxa) ။ သို့သော်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီရင်ခံစာ၏အဓိကအချက်မှာပိုမိုမြင့်မားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသောအခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, တူညီတဲ့ဒေတာအစုအပေါ်အခြေခံပြီးပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသော, သို့သော်ဆက်စပ်, သုတေသနမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း, တခြားနေရာအစီရင်ခံရသည်။27
ဇယား ၁ အားလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ variable တွေကိုအကြားဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့်ဆက်စပ်မှုပါရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏တစ်သက်တာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောသင်တန်းသား ၂၀.၀% (n = 20.5) သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမှားယွင်းကြောင်းအချို့သဘောတူခဲ့သည် (အဖြေရွေးချယ်မှုများမှအတော်အတန်သဘောတူသည်အထိသဘောတူလက်ခံထားသည်)၊ သဘောတူတယ်) ပြနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းလက္ခဏာများသည်မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ ဤအ 880 ဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်စပ်မှု, r = .5.8 (ဇယား ၁).
ဇယား ၁ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော variable များအကြားဆက်နွယ်မှု၏အားသာချက်ကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြသောစာရင်းဇယားများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိန်းများ (Pearson's r) (n = 880) ။
၁။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမိမိကိုယ်မိမိစွဲမှတ်ခြင်း 1.93 1.35 -
၂ 6.63 2.32 .55 ** -
၃ 11.25 3.90 .20 ** .24 ** -
၄။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း 3.68 2.25 .53 ** .44 ** .07 * -
5 ။ ယာနျဘာသာတရားကို 3.81 1.84 -.04 .11 ** .05 -.21 ** -
၆။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၏သဘောမကျခြင်း 3.46 1.63 −.08 * .03 .09 ** -.32 ** .44 ** -
7. ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲ 0.28 0.59 .23 ** .40 ** .23 ** .08 * .22 ** .22 ** -
** P <.001; * P <.05
အဆိုပါ PPMI မော်ဒယ်အကဲဖြတ်
မော်ဒယ် ၁ — ကိုယ်ပိုင် Self- စွဲလမ်းမှု
အဆိုပါအကဲဖြတ်မော်ဒယ်အတွက်ပုံဖော်ထားသည် ပုံ 1။ ကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲမှု (“ ကျွန်ုပ်သည်အပြာစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု”) ကိုအဓိကမှီခိုအားထားရာပုံစံတွင်ထားရှိသည်။ အပြုသဘောခန့်မှန်း Self- ရိပ်မိစွဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရှောင် (β = 0.13, P ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်လည်းအားနည်းသော်လည်းအပြုသဘောဆောင်သော်လည်း၊ β = 001, <.0.10) P = .001) အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအစွဲစွဲလမ်းမှု၏အပြင်းထန်ဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည် (β = 0.52, P <.001) နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဒုက္ခဆင်းရဲကိုအပြုသဘောဖြင့်ခန့်မှန်းသူ (β = 0.17, P <.001) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီသည့်လမ်းကြောင်းတွင်ဘာသာရေးဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားစေမည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် (β = 0.44, P <.001) နှင့်အပြုသဘောကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲ (β = 0.16, P <.001) ။ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနိမ့်ကျသောခန့်မှန်းသူဖြစ်သည် (β = -0.09, P = .013), ဒါပေမယ့် Self- ရိပ်မိစွဲအပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသိသာမဟုတ်ခဲ့ (β = 0.03, P = .368) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအပျက်သဘောဖြစ်စေသည် (β = -0.29, P <.001) ဒါပေမယ့်အပြုသဘောကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲ (β = 0.19, P <.001) ။ ထို့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ incongruence-related ဆင်းရဲဒုက္ခ Self- ရိပ်မိစွဲ၏အပြုသဘော, အတန်အသင့်အားကောင်းတဲ့ခန့်မှန်းခဲ့သည် (β = 0.15, P <.001) (ပုံ 1) ။ ထို့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့် ပါတ်သက်၍ စိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရခြင်းသည် ရှောင်လွှဲ၍ ဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် (r = 0.21, P <.001), ရှင်းလင်းပြတ်သား၏မျက်နှာကိုထောက်။ ကိန်းဂဏန်းအတွင်း, ခန့်မှန်းထားသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်စွဲ၏ Self- အကဲဖြတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ 33.9% ကရှင်းပြသည်။ for နမူနာပုံစံအတွက်မသင့်တော်သောအညွှန်းကိန်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမထိုက်မတန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်2(3) = 9.04, P = .029, CFI = 0.992, RMSEA = 0.048 နှင့် SRMR = 0.0274 ။
မော်ဒယ် ၂ - လိင်တူခြင်းအပြုအမူ
PPMI ပုံစံ၏ပြabilityနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် BPS အထွေထွေရမှတ်နှင့်အဓိကမှီခိုနေသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနှင့်အတူတူပင်မော်ဒယ်ခန့်မှန်းထားသည် (ပုံ 2) ။ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း (β = 0.13, P <.001) နှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ (β = 0.43, P <.001) ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအပြုသဘောဖြင့်ခန့်မှန်းသော်လည်း၊ ဘာသာတရားသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့သည် (β = 0.13, P <.001), ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲ (β = 0.31, ပြုသကဲ့သို့) P <.001) (ပုံ 2) ။ ကျန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ပုံဖော်ထားတဲ့ပထမပုံစံနဲ့မတူပါဘူး ပုံ 1။ အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဒယ် hypersexual အပြုအမူလက္ခဏာတွေအတွက်ကှဲလှဲ၏ 35.9% ကရှင်းပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယမော်ဒယ်အတွက်မသင့်လျော်သည့်အညွှန်းကိန်းများကအလွန်ကောင်းမွန်သောမသင့်လျော်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ χ (3) = 9.93, P = .019, CFI = 0.991, RMSEA = 0.051 နှင့် SRMR = 0.0282 ။
Grubbs et al မှအဆိုပြုထားသော (n = 880 နမူနာကို အခြေခံ၍) Moral Incongruence မော်ဒယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။3 ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုအတိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်အဓိကမှီခိုရသည့်အခန်းကဏ္inတွင်ထားရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းကိန်းများကိုမြှားပေါ်တွင်ပြသည် (**)P <.001, *P <.05) ။ အစက်သည်မျဉ်းကြောင်းသည်အရေးမကြီးသောဆက်နွယ်မှုကိုပြသည်။ ကိန်းဂဏန်း၏ဖတ်ရလွယ်ကူမှုအဘို့, မော်ဒယ်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence -related စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်ရှောင်ဖြေရှင်းနိုင် (r = 0.21 **) အကြားဆက်စပ်မှုကိုသရုပ်ဖော်မထားဘူး။
တင်ပြထားသောအလုပ်သည်အနည်းငယ်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းမှု၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအားမည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆိုတရားမ ၀ င်သောအကဲဖြတ်မှုကိုကြိုးပမ်းနေသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထွေထွေအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းနေခြင်း၏ခန့်မှန်းသူများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖော်ပြရန်မော်ဒယ်၏အခြေခံပုံသဏ္appropriာန်သင့်လျော်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည် (မော်ဒယ် ၁၊ ပုံ 1) နှင့်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း (ပုံစံ ၂၊ ပုံ 2) ။ သို့သော်အချို့သောနေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည်ပုံစံမှထွက်ပေါ်လာသောခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကွဲလွဲနေပြီးစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အပြင်တိကျသောပုံစံနှင့်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများရှိသည့်အနည်းဆုံးတိကျသော၊ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များရှိသည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ယခုလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် PPMI ပုံစံအတွင်းအဆိုပြုထားသည့်လမ်းကြောင်း ၃ ခုအပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည် - dysregulation path (ရှောင်ရှားနိုင်သည့်ပြbyနာကိုပြသသည့်အတိုင်း)၊ အသုံးပြုခြင်းလမ်းကြောင်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေဖြင့်ဖော်ပြသည်) နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်ခြင်းလမ်းကြောင်း (ခွဲစိတ်ခြင်း) ဘာသာရေးအရ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသဘောမတူမှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရလာဒ်များအရလမ်းကြောင်း ၃ ခုစလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုတံဆိပ်အောက်ရှိရောဂါလက္ခဏာများကိုရှင်းပြရာတွင်လမ်းကြောင်း ၃ ခုသည်ထူးခြား။ သိသိသာသာအထောက်အကူပြုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းလက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤအ3ဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်စပ်မှု, r =3ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီး၊ မော်ဒယ်အတွင်းမှာတင်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းသုံးလမ်းဟာအခြားတစ်ခုထက်လျှော့ချလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေးရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းတန်ဖိုးတန်ဖိုးယိုယွင်းခြင်းမရှိဘဲဖယ်ထုတ်လို့မရဘူး။ ၎င်းသည် PPMI ပုံစံမှအခြေခံခန့်မှန်းခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။3 ခန့်မှန်းမော်ဒယ်များ (၃၃.၉%၊ ပုံစံ ၁) နှင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု (၃၅.၉%၊ ပုံစံ ၂) တွင်မိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ကွဲလွဲမှု၏သိသာထင်ရှားသည့်အပိုင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
ပုံစံ၏လမ်းကြောင်း ၃ ခုအနက်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ကိုနောက်အခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence Path ကို
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်သောကရောက်မှုများကြုံတွေ့ရသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပိုမိုများပြားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည် PPMI မော်ဒယ်၏စာရေးဆရာများ၏ခန့်မှန်းအတည်ပြု3,31 Self- ရိပ်မိစွဲ၏ Self- အကဲဖြတ်ပုံဖော်အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ကစားသောအခန်းကဏ္နှင့်ပတ်သက်။24 ၎င်းကိုယေဘုယျပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောလက္ခဏာများအထိတိုးချဲ့သည်။ သို့သော်မော်ဒယ်၏ခန့်မှန်းချက်သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းစေခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းသူဖြစ်သင့်သည်။3,31 အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များကအတည်ပြုမပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီခြင်းထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုစွဲလမ်းခြင်းကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်များနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသည်26 (Lewczuk et al ၏လေ့လာမှုကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်27 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကဲ့သို့တူညီသောနမူနာအပေါ်ကောက်ယူတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ Self- ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုအပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမညီညွတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်သောကရောက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လက်ရှိပိုလန်နမူနာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုအနည်းငယ်ကိုယ်စားပြုသောနမူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည် အမေရိကန်အရွယ်ရောက်၏။25 ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်သက်တာအသုံးပြုခဲ့သူ ၂၀.၅% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမှားယွင်းကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြသည် (အဖြေရွေးချယ်မှုများသည်“ အတန်ငယ်သဘောတူ” မှ“ လုံးဝသဘောတူသည်” အထိ)၊ အမေရိကန် ၂၄% ကတူညီသောအဖြေကိုပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တူညီသောအတိုင်းအတာကို အခြေခံ၍ အမေရိကန်တက်ရောက်သူများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဘာသာရေးအရအနည်းငယ်မျှ ပို၍ ကြေငြာကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် (M = 20.5, SD = 24)25ထို့အပြင်အမေရိကန်အပေါ်ဖျော်ဖြေသုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီး PPMI မော်ဒယ်ထက် Self- ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence လမ်းကြောင်း၏အားနည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါအရာ, လက်ရှိနမူနာ (M = 3.81, SD ကို = 1.84) တွင်ပိုလန်သင်တန်းသားများကိုထက်။
ထို့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်သောကရောက်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်မိမိသိမြင်ခြင်းထက်ပြaticနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤပုံစံအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်မှာမိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းနေသောစွဲလမ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောအကျိုးဆက်များနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြစ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။20 အဆိုပါ BPS အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များ5ထဲကတစ်ခု34 ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပြသသည့်အညွှန်းဖြစ်သည်၊ Self- တံဆိပ်ကပ်သူတစ် ဦး စွဲနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related ဒုက္ခဆင်းရဲအကြားဆက်စပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များကထင်ဟပ်သောအခြားလေ့လာမှုများ, ကဲ့သို့နီးကပ်စွာမဟုတ်ပါဘူး။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆက်စပ်သော variable များအကြားလွှမ်းမိုးမှုကွင်းဆက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သောပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်ပိုမိုလိုလားကြပြီးကိုယ်ပိုင်လိင်အပြုအမူနှင့်မွေးစားယုံကြည်မှုများ၊ သဘောထားများနှင့်စံနှုန်းများအကြားကွဲလွဲမှုခံစားချက်များကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရသည်။ ဤကိစ္စများတွင်ဘာသာရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာမပြင်းထန်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းသည်ဘာသာရေးအခြေအနေနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် နိဒါန္း ဤပြissueနာအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အပိုင်း) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအပြုအမူသဘောထားသဘောထားလွဲမှားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနောက်ထပ်အချက် (၂) ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် - အပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ) နှင့်သဘောထားများ၏ကန့်သတ်ချက်များ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားမှု၊ Grubbs et al ၏လေ့လာမှုကိုကြည့်ပါ)3) ။ ဘာသာရေးနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုသိသိသာသာကြိုတင်ခန့်မှန်းသော်လည်းသူတို့၏အလှူငွေမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခန့်မှန်းသူများအားလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မနှစ်သက်လက်ခံမှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သောအခြားစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဥပမာ - လူမှုရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအမြင်များ၊ ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒ53,54 သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ၏အခြို့သောအကိုင်းအခက်,55 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်လိင်အပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်များ၊ သဘောထားများနှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကိုယ်ပိုင်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားခြင်းနှင့်သိလွယ်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သော variable များ (ဥပမာမိမိကိုယ်ကို၊ အသိအမြင်၊ အမှားများအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်ဒယ်အတွက်၎င်းတို့၏ဝေဖန်ချက်များတွင်အခြားစာရေးဆရာများမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သောအကြံပြုချက်များကိုပဲ့တင်ထပ်သည်။19,22
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရအခြားပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဘာသာရေးလူများကပိုမိုပြpornနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဘာသာတရား၏ပြityနာကိုညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်သြဇာညောင်းသည်မှာအားနည်းသော်လည်းလက်ရှိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာရေးနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုလက္ခဏာများအကြားအားနည်း။ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည့်ယခင်လေ့လာမှုများ၏အနည်းဆုံးသောအပိုင်းနှင့်သဘောတူသည်။25,26 (Lewczuk et al ၏လေ့လာမှုကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်27) ။ တစ် ဦး ကဆက်စပ်သောစပ်လျဉ်းစွဲ၏ Self- သဘောထားအမြင်အဘို့အရှာမတွေ့ပါ။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်သည်မော်ဒယ် ၁ တွင်မိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းမှုနှင့်မော်ဒယ် ၂ တွင်ပြaticနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကညစ်ညမ်းစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုမိမိကိုယ်မိမိအကဲဖြတ်ခြင်းသည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းများကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုယူမှတ်ခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမျှသာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည် ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ခံယူချက်သက်သက်သာမဟုတ်ပါ (Humphrey ၏လေ့လာမှုတွင်ဆွေးနွေးပါ။ )56) ။ ကှဲလှဲ၏သိသာသောအဘို့ကိုပိုကောင်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအားဖြင့်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြသည်ပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၏ရောဂါမော်ဒယ်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည်နှင့်အနည်းဆုံးအချို့သောအမှုအရာအသုံးပြုမှုရောဂါများနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲမှုများ၏လက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူသည်၊ အနည်းဆုံးရောဂါ၏သင်တန်း၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် (Kraus et al အားဖြင့်လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်)1 နှင့် Potenza et al57) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၎င်း၏လွှမ်းမိုးမှုသည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ခြင်းထက်အနည်းငယ်အားနည်းနေသော်လည်း (β = 0.43 vs β = 0.52) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြစ်ရှိသည်ဟူသောပြproblemနာအားအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသာမကထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းသာမကပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းခြင်းထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာများရှိသောကြောင့်ဤအရာကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။34
ရှောင်ကြဉ်ရသည့်ပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမကျမှုကိုညွှန်ပြသည်။ ရှောင်ကြဉ်ရသည့်ပုံစံကိုပိုမိုအသုံးပြုလေ့ရှိသူများသည်လည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းသူများအဖြစ်ရှုမြင်လိုကြပြီးပြpornနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသည့်လက္ခဏာများပိုမိုပြင်းထန်သည်။ ၎င်းသည်ပြresearchနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုကိုရှောင်ရှားခြင်း၏အထူးအရေးပါပုံကိုပြခဲ့သောယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။39, 40, 41 ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ရှောင်ရှားခြင်းနည်းဗျူဟာ (ဥပမာ - လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ၏အခြားနယ်ပယ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသည့်လေ့လာမှုများနှင့်လည်းသဘောတူသည်။ သို့သော်မှီခိုသောကိန်းရှင်နှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အပေါ်သက်ရောက်မှုအားနည်းနေသည် (β = 0.15, P <.001) နှင့်စွဲခြင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းထက်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအတွက်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောအရာများပါ ၀ င်သောကြောင့် (ဥပမာ - ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ အမျက်ဒေါသ၊ အထီးကျန်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုနေသည်) သည်ပြproblemနာကိုပြoperationနာဖြစ်စေသော BPS ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့လေ့လာမှုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု။
အဆိုပါမော်ဒယ်နှင့်အနာဂတ်သုတေသန၏ Shape များအတွက်ဂယက်ရိုက်
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ PPMI ပုံစံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်းနှင့်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုမိမိကိုယ်မိမိသိမြင်စေသည့်အထွေထွေအချက်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် dysregulation လမ်းကြောင်းသည်မော်ဒယ်၏လက်ရှိဗားရှင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအခြားသုတေသီများအားဖြင့်ထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။16 ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်နဲ့တိုးချဲ့ထားသင့်တယ်။ မော်ဒယ်၏ကန ဦး အဆိုပြုမှာတော့ Grubbs et al3 လျော့နည်းအသေးစိတ်နှင့်အတူ dysregulation လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related အချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်မော်ဒယ်၏အဓိကအာရုံစိုက်သောကြောင့်ဤချဉ်းကပ်မှုကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အကျိုးဆက်အနေဖြင့် PPMI model ၏လက်ရှိအယူအဆသည် dysregulation နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များ (ဥပမာစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ impulsivity၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ compulsivity) ကိုအထွေထွေနှင့်မသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားတစ်ခုအတွင်းသို့ထည့်သွင်းပြီး၎င်း variable များအကြားလွှမ်းမိုးမှုယန္တရားများကိုဖော်ပြခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သည်။ အရေးပါမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီသို့မဟုတ် dysregulation-related variable တွေကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-related variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့။ ထိုသို့သောဆက်ဆံရေးကိုအခြားသူများကအဆိုပြုခဲ့ကြသည်16,22 ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ရှောင်ကြဉ်မှုကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆင်းရဲခက်ခဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (r = 0.21, \_ t P <.001) ရှောင်ရှားဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုညွှန်ပြနိုင်သည်။
PPMI မော်ဒယ်ကိုကန ဦး လေ့လာမှုအရအစောပိုင်းကအတည်ပြုခဲ့တာနဲ့အမျှ၎င်းကိုတိုးချဲ့ပြီး ထပ်မံ၍ ရည်မှန်းချက်ထားသည့်ယေဘုယျပုံစံသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်သင့်သည်။ ။ ၎င်းကိုရရှိရန်လက်ရှိ PPMI ပုံစံကဲ့သို့သောတိကျသောမော်ဒယ်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမော်ဒယ်များ (ဥပမာ - I-PACE မော်ဒယ်လ်) နှင့်ပေါင်းစည်းသင့်သည်။12,58အပြုအမူ dysregulation-related အချက်များနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်သို့သွားပေမယ့်ယခု၏အဖြစ်, ကငျြ့တရား -related variable တွေကို၏အခန်းကဏ္negကိုလျစ်လျူရှုသော) ။ ဤချဉ်းကပ်နည်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ခြင်းအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်များအားလုံး၏ပုံကိုအပြည့်အ ၀ ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် အပြန်အလှန်လွှမ်းမိုးမှုရှိသောကြောင့်ဤသုတေသနဌာနခွဲနှစ်ခုသည်သီးခြားစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ မရသင့်ပါ။16,22 ဤအပြန်အလှန်မှီခိုမှုကြောင့်မော်ဒယ်၏ dysregulation-related side သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျသောအခါကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသည့်လမ်းကြောင်း၏ပုံသဏ္definာန်ကိုသေချာစွာမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ဆွေးနွေးထားသောမူဘောင်ကိုထပ်မံထောက်ပံ့ရန် PPMI မော်ဒယ်အတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာ Impulsivity, Maladaptive Emotion Regulation, perfectionism) ၏အခြားညွန်ကိန်းများကိုစမ်းသပ်သင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတိုးချဲ့မှုကိုမော်ဒယ်၏စာရေးဆရာများမှကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ကြိုဆိုခြင်းခံရသည်။31 ငါတို့အပြည့်အဝနှင့်အတူသဘောတူသည်။
ထောက်ပြသင့်သောနောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုသည်လူ ဦး ရေစာရင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောအနာဂတ်လမ်းညွှန်တစ်ခုမှာပြsamplesနာများရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလက္ခဏာများလက်တွေ့စမ်းသပ်နေသည့်လက်တွေ့နမူနာများကို အခြေခံ၍ မော်ဒယ်လ်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များ၏အရေးပါမှုသည်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်တွေ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် PPMI ပုံစံကို ICD-11 တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသော CSBD တွင်အသုံးပြုသင့်သည်13,14 ဒီရောဂါအဘို့အအစီအမံစိစစ်အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ။ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှအပအခြားလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အမူအကျင့် - ပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာကိုလေ့လာရန်အကြံပြုသည့်အခြားသုတေသီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။20 အရာယေဘုယျပြproblemနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာတွေကိုရှင်းပြဖို့မော်ဒယ်တစ်ခု extension ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောအရာ ၀ တ္ထုများပြalizingနာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပစ္စည်းနှင့်နည်းစနစ်များ တရားဝင်လက်တွေ့ဖွင့်ဆိုချက်များ (ဥပမာပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း) ကို အခြေခံ၍ အလွဲသုံးစားမှုကင်းမဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှု၊ နိဒါန္း အပိုင်း) လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
လက်ရှိသုတေသနသည် PPMI ပုံစံကိုအခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ပိုလန်လူမျိုးများကိုတိုးချဲ့သည်။ သို့သော်ပိုလန်နိုင်ငံသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတူမှုများရှိသည် (လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူ ၇၇.၃% သည်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်) ။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံစံကိုထပ်မံအတည်ပြုသင့်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ကန့်သတ်အချို့ကိုပြီးသား (တစ်ခုတည်း dysregulation-related အချက်) မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လက်ရှိအလုပ်သည်ကဏ္alityအလိုက်သုတေသနဒီဇိုင်းကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအလုပ် PPMI နှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဤ variable တွေကို၏လမ်းကြောင်းဆန်းစစ်ကြောင်း longitudinal လေ့လာတွေ့ရှိချက်မရှိဘဲ, ကနိဂုံးပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏မည်သည့်မော်ဒယ်အကဲဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အွန်လိုင်းစစ်တမ်းမှာပါ ၀ င်သူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအဓိပ္ပါယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြခဲ့ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ PPMI မော်ဒယ်သည်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဆင့်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းမိုးသည့်အချက်များကိုဖော်ပြရန်အလားအလာရှိသောမူဘောင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်အချက် ၃ ခု၊ သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သုံးစွဲမှုအလေ့အထများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမညီညွတ်မှု ၃ ခုရှိသည်။ ဖော်ပြထားသောအုပ်စုသုံးစုသည်အယူအဆဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်အလားအလာကောင်းပြီးအနည်းငယ်မျှတမှုရှိပြီးအနာဂတ်သုတေသနကြိုးပမ်းမှုများတွင်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမညီညွတ်ခြင်း၊ သုံးစွဲမှုအလေ့အထများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမညီညွတ်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအားလုံးသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတို့တွင်ရောဂါလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုကိုထူးခြားစွာအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုကုသမှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ လမ်းကြောင်း (၃) ခုမှတစ်ခုချင်းစီမှဖြစ်ပေါ်လာသောအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများသည်အလားတူကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့တွင်သိသိသာသာကွဲပြားသောကုသမှုနည်းလမ်းရှိသင့်ပြီးကုသမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများရှိသင့်သည် (Grubbs et al ၏လေ့လာမှုကိုကြည့်ပါ။3,31 Kraus နှင့် Sweeney;18 ထို့အပြင် incongruence-related ဆင်းရဲဒုက္ခ CSBD များအတွက်ချန်ထားသည့်စံနှုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့,13 Kraus et al,14 နှင့် Gola et al59) ။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းအလေ့အထနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအားကိုင်တွယ်ရာတွင်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ CSBD သည် ICD-11 တွင်ပါ ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကိုအရံအဖြစ်မဟုတ်ဘဲဗဟိုအဖြစ်ရှုမြင်သည်13 မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ overpathologization ကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်သော့ချက်60, 61, 62 ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်လူမှုရေးစံနှုန်းများသည်မိမိကိုယ်ပိုင်လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၌သော်လည်းကောင်း၊ ထိန်းချုပ်ထားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိသောသူများ၌လည်းကောင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။18,63 သူတို့အားတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် CSBD ကိုရှာဖွေခြင်းသည်မှားယွင်းစွာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ CSBD အတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားကျင့် ၀ တ်မလိုက်နာမှုတို့ကြောင့်ဒုတိယအသုတ်အနေဖြင့်ဤရောဂါကိုဖော်ထုတ်ရန်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။14 သို့သော်၊ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဤရောဂါကိုအသုံးပြုရန်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ CSBD သည်ကွဲပြားသော etiologies နှင့်အတူပြdifferနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်မှားယွင်းအသုံးပြုတဲ့ "ထီးရောဂါ" ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် Clinician ရောဂါဖြစ်စဉ်၏ဤခြားနားချက်များကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ရပေမည် ထို့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုများသည်အခြားအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ (အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ လူမှုကွန်ယက်စွဲမှု၊27 ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကကိုယ်တိုင်တင်ပြထားတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအတွက်သာသတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရစွဲလမ်းနေသူအဖြစ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြေငြာခြင်းသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ ကိုယ်တိုင်သိမြင်သောစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှစ်ခုလုံးသည် PPMI ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
Karol Lewczuk; Iwona Nowakowska ဖြစ်သည်
ဒေတာများကိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်း Karol Lewczuk; Iwona Nowakowska
Mateusz Gola; ယောရှုသည်ယော Grubbs
Karol Lewczuk; Mateusz Gola; Joshua B Grubbs; Agnieszka Glica; Iwona Nowakowska
Kraus, SW, Voon, V. နှင့် Potenza, MN compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ? ။ စှဲမွဲမှု. 2016; 111: 2097-2106
Bancroft, ဂျေနှင့် Vukadinovic, Z. လိင်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သီအိုရီမော်ဒယ်တစ်ခုဆီသို့။ J Sex Res. 2004; 41: 225-234
Grubbs, JB, Perry, SL, Wilt, JA et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 397-415
Stein, DJ သမား hypersexual ရောဂါခွဲခြား: compulsive, ထကြွလွယ်သောနှင့်စွဲလမ်းမော်ဒယ်များ။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am. 2008; 31: 587-591
ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, Bhullar, N. et al ။ Hypersexuality - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသံသရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2017; 46: 2231-2251
Wéry, အေနှင့် Billieux, ဂျေ ပြနာဆိုက်ဘာဆက်စ် - စိတ်ကူး၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ. 2017; 64: 238-246
က de Alarcón, R. , de la Iglesia, JI, Casado, NM et al ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုစွဲ - ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကို Clin Med. 2019; 8: 91
ရွှေ, SN နှင့် Heffner, CL လိင်စွဲ: များစွာသောအယူအဆ, အနည်းဆုံးဒေတာ။ Clin Psychol ဗြာ. 1998; 18: 367-381
Gola, အမ်နှင့် Potenza, MN pudding ၏သက်သေပြအရသာ၌တည်ရှိ၏: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောမော်ဒယ်များနှင့်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ဒေတာလိုအပ်သည်။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2018; 47: 1323-1325
Gola, အမ်နှင့် Potenza, MN ပညာရေး၊ ခွဲခြားခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအစပျိုးခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - အပေါ်မှတ်ချက် - ICD-11 တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမမှန်ခြင်း (Kraus et al, 2018) ။ J ကို Behav စွဲ. 2018; 7: 208-210
ချီးမွမ်း, N. မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများကိုပြီးသားအကဲဖြတ်ပါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2017; 46: 2269-2274
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, လူငယ်, KS, Laier, C. et al ။ တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း - Person-Affect-Cognition- Execution (I-PACE) မော်ဒယ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2016; 71: 252-266
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ ICD-11 - အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ (: မှာရရှိနိုင်)
နေ့စွဲဝင်ရောက်: စက်တင်ဘာ, 2019
Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P. et al ။ ICD-11 တွင်မဖွယ်မရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2018; 17: 109-110
Fuss, ဂျေ, Lemay, K. , Stein, DJ သမား et al ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ICD-11 အခန်းများအပေါ်အများပြည်သူအကျိုးသက်ရောက်သူများ၏မှတ်ချက်များ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2019; 18: 233-235
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, အန်တို, အက်စ်, Wegmann, အီး et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောသီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုခြင်း၏ယန္တရားများ -“ အခြေအနေ” နှစ်ခုသည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းသီအိုရီအရကွဲပြားနေပါသလား။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 417-423
Fisher, WA, Montgomery-Graham, အက်စ်နှင့် Kohut, T. ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်အပြာစာပေပြproblemsနာများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 425-429
Kraus, SW နှင့် Sweeney, PJ ပစ်မှတ်ကိုနှိပ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပြproblemနာများအတွက်အသုံးပြုသူများကိုကုသရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 431-435
Vaillancourt-Morel၊ အမတ်များနှင့် Bergeron, S. တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဘာသာတရားများအပြင်မိမိကိုယ်ကိုထင်မြင်သောပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 437-441
ဝေါ်လ်တန်, MT Selfong အစီရင်ခံ "sex စွဲ" ၏အွန်လိုင်းနမူနာအတွက်ပြofနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ variable ကိုအင်္ဂါရပ်အဖြစ် incongruence ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 443-447
Willoughby, BJ porn box ထဲမှာကပ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 449-453
Wright, PJ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 455-460
Festinger, L. သိမှု dissonance ။ သိပ္ပံ Am. 1962; 207: 93-106
Grubbs, JB နှင့် Perry, SL ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - အရေးကြီးသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။ J Sex Res. 2019; 56: 29-37
Grubbs, JB, Kraus, SW နှင့် Perry, SL တို့ဖြစ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောနမူနာတစ်ခုမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း - အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ၊ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမတူညီမှုအခန်းကဏ္။ ။ J ကို Behav စွဲ. 2019; 8: 88-93
Grubbs, JB, Grant, JT နှင့် Engelman, J. ညစ်ညမ်းစာပေစွဲလမ်းသူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲ compulsive. 2018; 25: 269-292
Lewczuk K, Nowakowska I, Lewandowska K, et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုနှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်မိမိကိုယ်ကိုအပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများအဖြစ် (အပြာစာပေ၊ အင်တာနက်၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်ဂိမ်းစွဲ) ဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးကြိုတင်စာရင်းသွင်းလေ့လာမှု။ ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာ။
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI et al ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာရေး၊ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2017; 46: 1733-1745
Gola, အမ်, Lewczuk, K. နှင့် Skorko, အမ် အဘယ်အရာကအရေးကြီးသည် - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအရေအတွက်သို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ J Sex Med. 2016; 13: 815-824
Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ် et al ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြproblemနာအလျောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း။ J ကို Behav စွဲ. 2017; 6: 445-456
Grubbs, JB, ပယ်ရီ, အက်စ်, Wilt, ဂျာ et al ။ မှတ်ချက်ပေးရန်တုံ့ပြန်မှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2019; 48: 461-468
Corrigan, PW, Bink, AB, Schmidt, အေ et al ။ Self- အမည်းစက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိခြင်းနှင့်“ ဘာကြောင့်ကြိုးစားပါ” အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကကျန်းမာရေး. 2015; 5: 10-15
ဖာနန်ဒက်ဇ, DP, Tee, EY နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇ, EF Cyber ​​Pornography သည် Inventory-9 ရမှတ်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်အသုံးပြုရန်အမှန်တကယ်မဖြစ်မနေဖော်ပြနေပါသလား။ abstinence အားထုတ်မှု၏အခန်းကဏ္oringကိုရှာဖွေစူးစမ်း။ လိင်စွဲ compulsive. 2017; 24: 156-179
Kraus S, Gola M, Grubbs JB, et al ။ , အကွိမျမြားစှာနမူနာမြားတှငျအတိုတိုညစ်ညမ်း Screener ၏တရားဝင်မှု။ သုံးသပ်ချက်အောက်မှာ။
ဖာနန်ဒက်ဇ, DP နှင့် Griffiths, MD ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူရိယာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ (0163278719861688)Eval ကျန်းမာရေးပါမောက္ခ. 2019;
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI et al ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအားခန့်မှန်းသူများအဖြစ်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2015; 44: 125-136
Grubbs JB, Kraus SW, Perry SL, et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်မဖွယ်မရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ကဏ္Crossများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အပြိုင်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာကိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှရလာဒ်များ။ သုံးသပ်ချက်အောက်မှာ။
Grubbs, JB, Wilt, ဂျာ, Exline, JJ et al ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - လောင်ဂျီတွဒ်စစ်ဆေးခြင်း။ စှဲမွဲမှု. 2017; 13: 496-506
Lew-Starowicz M, Lewczuk K, Nowakowska I, et al ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ dysregulation ။ စာနယ်ဇင်းများတွင်လိင် Med ဗျာ။
ရိဒ်၊ RC၊ Harper၊ JM နှင့် Anderson တို့၊ EH hypersexual လူနာများကအရှက်ကွဲခြင်း၏နာကျင်သက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း Clin Psychol Psychother. 2009; 16: 125-138
Levin, ME, Lee, EB နှင့် Twohig, MP ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ Psychol ဖမ်းယူရေး. 2019; 69: 1-12
Herman-Stabl, MA, Stemmler, M. နှင့် Petersen, AC ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကိုလူငယ်ဆယ်ကျော်သက်. 1995; 24: 649-665
Holahan, CJ, Moos, RH, Holahan, CK et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးဆက်၊ ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများ - ၁၀ နှစ်မော်ဒယ်။ J ကို Clin Clin Psychol. 2005; 73: 658-666
Roth, အက်စ်နှင့် Cohen ကို, LJ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း။ နံနက် Psychol. 1986; 41: 813-819
Kohut, T. နှင့်Štulhofer, အေ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၌ဘာသာတရား၏အခန်းကဏ္: ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 2018; 44: 759-775
Martyniuk, U. , Briken, P. , Sehner, အက်စ် et al ။ ပိုလန်နှင့်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 2016; 42: 494-514
Grubbs, JB, Sessoms, J. , Wheeler, DM et al ။ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုစာရင်း - အကဲဖြတ်ချက်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။ လိင်စွဲ compulsive. 2010; 17: 106-126
ရိဒ်, RC, Garos, အက်စ်နှင့်လက်သမား, BN ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအမျိုးသားပြင်ပလူနာနမူနာတွင်ထားရှိခြင်း။ လိင်စွဲ compulsive. 2011; 18: 30-51
Carver, CS သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုတိုင်းတာလိုသော်လည်းသင်၏ protocol သည်ရှည်လွန်းသည်။ အတိုချုပ်ကြည့်ပါ။ Int J Behav Med ဖြစ်သည်. 1997; 4: 92
Schnider, KR, Elhai, JD နှင့် Grey, MJ Coping ပုံစံအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပြင်းထန်သောဆုံးရှုံးမှုကိုသတင်းပို့သောကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားရှုပ်ထွေးသော ၀ မ်းနည်းဖွယ်လက္ခဏာများပြင်းထန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ J ကို Couns Psychol. 2007; 54: 344
Arbuckle, JL IBM SPSS Amos 23 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်။ (: မှာရရှိနိုင်()ဝင်ရောက်သြဂုတ်လ 18, 2019)အာမုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်း, 2014
ဟူ, LT နှင့် Bentler, pm တွင် covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ Struct Equ မော်ဒယ်လ်. 1999; 6: 1-55
Droubay, BA, Butters, RP နှင့် Shafer, K. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆွေးနွေးပွဲ - ဘာသာရေးနှင့်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအတွက်ထောက်ခံမှု။ J ဘာသာရေးကျန်းမာရေး. 2018; : 1-16
သိုးသငယ်, JL ဘယ်သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ချင်တယ်၊ mass Community Soc. 2004; 7: 279-299
Ciclitira, K အပြာစာပေ၊ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ - အပျော်အပါးနှင့်နိုင်ငံရေးအကြားတွင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ. 2004; 7: 281-301
Humphrey, K. ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်ချက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏။ စှဲမွဲမှု. 2018; 113: 387-388
Potenza, MN, Gola, M. , Voon, V. et al ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါလား? ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု. 2017; 4: 663-664
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Wegmann, အီး, Stark, R. et al ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအတွက် Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) မော်ဒယ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမမှန်မှုများမှအပစွဲလမ်းနေသည့်အပြုအမူများအားမွမ်းမံခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖော်ပြချက်။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2019; 104: 1-10
Gola M, Lewczuk K၊ Potenza, MN, et al ။ compulsive လိင်အပြုအမူရောဂါများအတွက်စံထဲမှာဒြပ်စင်ပျောက်ဆုံးနေ။ သုံးသပ်ချက်အောက်မှာ။
Klein, အမ် လိင်စွဲ: အန္တရာယ်ရှိသောလက်တွေ့အယူအဆ။ ဆွစ်သမ္မတ. 2003; 31: 8-11
ဆောင်းရာသီ၊ ဂျေ Hypersexual disorder - ပိုပြီးသတိထားချဉ်းကပ်မှု [Editor to Letter] ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2010; 39: 594-596
Ley, D. , Prause, N. နှင့် Finn, P. ကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိပါ - 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုပုံစံ' ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ Curr လိင်ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ်. 2014; 6: 94-105
Efrati၊ Y ဘုရားသခင်၊ ငါလိင်အကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘာသာရေးဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုမအောင်မြင်သောဖိနှိပ်မှုကြောင့်ပြန်လည်နိုးထလာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု J Sex Res. 2019; 56: 146-155